BLI Montréal | BLI Zvikoro zvemitauro muCanada
Iwe unoda kudzidza Chirungu kana chiFrench?
Inowanikwa munharaunda inoyevedza, chikoro chakakomberedzwa neyakavakwa, zvekudya uye zvekutenga. Iyo inzvimbo yekuve!
Makirasi edu madiki anotendera iwe kuvaka hukama uye unokupa iwe mukana wekudzidzira mutauro nguva dzose!
Nemazana ebudiriro nyaya, iwe uchada kuva imwe imwe! Tarisa uone humwe hweufakazi uye uzvionere wega!
HUYA KUTI MONTREALZvinhu Zvikuru
BLI Montreal iri mukati memoyo weOld Montreal, inzvimbo izere nehupenyu, padyo nepedyo neese nzvimbo hombe kuMontreal. Isu tinowanikwa zviri nyore kungoita maminetsi mashoma kubva kuRuwa-d'Armes metro chiteshi, mune yechivakwa nhaka padyo neiyo Notre-Dame Basilica inozivikanwa.
MontrealOngorora uye tsvaga guta rine mitauro miviri
Zvivakwa zvedu zvemazuva ano zvinopa vadzidzi nzvimbo yakasununguka uye inonakidza inoita kuti kudzidza kwacho kufadze kwazvo uye kunakidze.
Yakatenderwa neMitauro Canada, BLI Montreal chikoro chemutauro chine makore anopfuura makumi mana chiitiko mune indasitiri yezvemitauro yemitauro uye zvinobudirira zvirongwa zvedzidzo uye zvakazara kunyudza mumatanho ese.
Isu tinoshandisa nzira ine simba, inodzidzisa mudzidzi uye yekudyidzana izvo hazvizongokubatsira iwe kuve nyanzvi nehunyanzvi mumutauro, asi zvakare zvichakupa maturusi ekubudirira pane imwe nhanho yepasirese.
Kana chinangwa chako chiri chekudzidza Chirungu, chiFrench kana zvese, huya kuBLI uye ugare wakasarudzika ruzivo rwekudzidza.
1 Komputa lab
2 Mudzidzi mariro
12 Mudzidzi pakirasi imwe neimwe
Kana iwe uchida kudzidza Chirungu kana chiFrench munzvimbo ine hutsika hwakawanda, Montreal ndiyo nzvimbo yekuzviita.
Montreal ndiro guta rechipiri rakakurisa kutaura chiFrench munyika (mushure meParis)
Imba yenyika inozivikanwa Cirque du Soleil, Montreal iguta redunhu
Montreal inokorobha yechipiri yenhamba yepamusoro yeresitorenzi imwe neimwe muNorth America
Montreal iguta reUNESCO rekugadzira
Montreal ine huru pasi pevhu yekutengesa mall munyika
Montreal ine nguva ina dzakasiyana, dzinoti, zhizha, nguva yechando, kutumbuka uye kudonha
Hockey ndiyo mutambo unodiwa weMontreal
Mari yekugara muMontreal iri pakati pezvakadzika muCanada.
Kofi - $ 3.00
Tiketi yemuvhi - $ 12.00
Kwekudya kwemasikati - $ 10.00
Kudya kwemanheru - $ 20.00
Kufambisa fambisa - $ 82.00 / mwedzi
Montreal iri padyo nemamwe maguta makuru akadaro
New York uye Boston
Muzhizha, mhemberero dzinowanzoitika. Iyi inguva ino apo International Jazz festival inoitika, imwe yeakanakisa pasi rose, aine makore makumi matatu etsika uye inokwezva vateki vazhinji vanobva pasi rese.
Iko kune zvekare imwe yemitambo mikuru yemitambo munyika, iyo yakakurumbira Just for kuseka festival.
Pamusoro pemitambo, Montreal anotendawo Fomula 1 Grand Prix.
Iyo yakakurumbira Cirque du Soleil iri muMontreal.
BLI inotora kudzidza kupfuura mukirasi.
Rarama mutauro iwe wauri kudzidza nekutora chikamu mune yedu chirongwa chirongwa chinopa zviitiko zvikuru zuva rega rega.
BLI inopa yakanakisa chiitiko chirongwa uye tinokukurudzira kuti utore muzvinhu zvedu nepamunogona napo. Kutora chikamu kuchakubvumidza kuti ubatanidze neshamwari uye kuti uongorore uye uone hupenyu uye tsika muMontreal uye / kana Quebec City pamwe nekukupa mukana wekudzidzira mutauro wauri kudzidza kunze kwekirasi.
Iwe uchakoshesa zvisingaite zviitiko zvauchayeuka hupenyu hwako hwese. Chirongwa chedu chezviitiko chinokupa iwe mukana wekuwana uye kuongorora iro guta rauri kudzidza. Zorora uye shandisa nguva neshamwari dzako nyowani dzenyika dzese iwe uchiramba uchidzidzira chiRungu kana chiFrench chako munzvimbo yekuzorora uye unosangana neshamwari nyowani.
Chirongwa chedu chezvekuita chinosiyana mwaka neyaka mwaka uye zvinosanganisira zviitiko zvakaita sengekufamba, kuyevedza, makirabhu ekukurukurirana, karaoke husiku, mafirimu husiku, mapato emitambo, kufamba bhasiketi, kushambadzira, kushanyira miziyamu, kuenda kumakonzati, nezvimwe zvakawanda.
Mamwe mabasa emahara uye mamwe ane mutengo unozoenderana nerudzi rwe chiitiko.
Mabasa ese anotungamirirwa nemurongi wemabasa uye / kana mudzidzisi
Nzvimbo inoshamisa yeMontreal inokutendera iwe kuti uwane nzvimbo zhinji dzakanaka padyo neguta
Mamwe ekushanya kwedu kwevhiki nevhiki uye kubuda:
* Kuenda kuUSA
Kana uine vhiza yekupinda muCanada visa, unofanirwa kubvumidzwa kuenda kuUSA sekureba vhiza yako uye unodzokera kuCanada usati wapera kugara kwako kwakabvumirwa muCanada (http: //www.cic.gc .ca).